mother – Healthy Life Journal
သင့်မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအမွေကို ဆက်ခံနေရသလား . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျန်းမာရေးအခြေအနေအများစုက မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဆက်နွှယ်မှုရှိပါတယ်။ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကင်ဆာသုတေသနလေ့လာသူတွေက မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ သူ့မိခင်ငယ်စဉ်က စတင်ရာသီလာတဲ့ရက်ရဲ့ သုံးလအတောအတွင်းမှာ သူလည်း(အဲဒီအသက်အရွယ်မှာ) ရာသီလာလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မိခင်ထံက မျိုးရိုးဗီဇလိုက်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။...
————-၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊————- အမျိုးသမီးအများစုဟာ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးထက်ဝက်နီးပါးဟာ ကလေးတွေ မူကြိုကျောင်းမပို့ခင်မှာကို လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သင်နဲ့ သင့်မိသားစု အဆင်ပြေပြေ လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း သင့်အနေနဲ့ သင့်ကလေးကို...
မိခင်နို့ရည်ထုတ်စနစ် (Apocrine)နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကျွန်မတို့အားလုံး ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက အာဟာရဓါတ်ပြည့်ဝအောင် မိခင်နို့ရည်ကို စို့ခဲ့ကြရတယ်။ မိခင်နို့ရည်ထုတ်စနစ်အကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။ကျွန်မတို့သိထားသလိုပဲ Mammals လို့ခေါ်တဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါအများစုဟာ Apocrine လို့ခေါ်တဲ့ နို့ရည်ထုတ်စနစ်နဲ့ နို့ရည်ထုတ်ကြတယ်။ လူတွေရဲ့နို့ရည်ထုတ်တဲ့ပုံစံ (Apocrine secretion process) ကတော့...
မိခင်လောင်းတို့ သိလိုသည့် မေးခွန်းများ
ကလေးတစ်ယောက်ကို ချောချောမောမောမွေးနိုင်တာ ဘဝရဲ့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ပါ . . Q. ကလေးတစ်ယောက်ကို ချောချောမောမောမွေးနိုင်တာက ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ကလေးတွေ မွေးနေကြတာပဲဆိုတော့ မှန်ပါသလား ဆရာ။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ A. မနေ့ညက...